!!#20/3 #ကိုးကန့်နယ်စပ်မှာစစ်ရေးပြင်ဆင်နေတဲ့တရုတ်တပ် #KOKANG #BORDER #CHINA | democracy for burma
tags: ကိုးကန့် သူပုန်များအား, တရုတ်ဘက်သို့ထွက်ပြေးလာသော, တရုတ်ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့, တရုပ် လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ , နယ်စပ်မှာ, များခြေကုတ်ယူခံစစ်ပြင်ထားသောပွိုင့်၁၄၆၈, တောင်ကုန်းအားသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်း, လောက်ကိုင်နဲ့ချင်းရွှေဟော်, Burma, CLIP, Dashuijing, MOI, Myanmar, TNLA, WAR
ဖုန်ကြားရှင်နဲ့ အပေါင်းအပါသူပုန်တွေ ဘယ်လောက်ကျလဲ ဘယ်လောက်ဒဏ်ရာရ စုတ်ပြတ်ပြီးခွေးသေဝက်သေသေခွေးပြေးလဒပြေးပြေးနေရလဲဆိုတာမေးနေတဲ့သူတွေ ကြည့်
photo.. ယနေ့ ပွိုင့်-၁၉၆၅တောင်ကုန်းကို
သော တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံး၊ဒဏ်ရာ
ရကာ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားသော သူပုန်များအား ဤကဲ့သို့မြင်တွေ့
ရစဉ်… cr. kokhan
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၉၆၅ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိ နေပြည်တော် မတ် -၂၀ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက လော်ကွာကျိုင်းမြောက်ဘက်ရှိ သောင်းကျန်းသူများအခိုင်အမာခြေကုပ်ယူ ခုခံလျက်ရှိသော ပွိုင့်-၁၉၆၅ တောင်ကုန်းအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်းတောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတောင်ကုန်း ပေါ်တွင် လူ ၂၀၀ ခန့်ကောင်းစွာ တပ်ဖြန့်နိုင်သော ဗုံးခိုကျင်းများ၊ ခေါင်ကကုတ်ပါပစ်ကျင်းများ၊ မြေခွေးကျင်းများနှင့် လူနေတဲကြီး ၁၀ လုံးခန့်တို့အား တည်ဆောက် အခြေပြု ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ အလားတူ ပွိုင့်-၁၉၆၅ ၏ မြောက်ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၉၅၁ နှင့် ပွိုင့်-၁၉၆၈ အပါအဝင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်းများအား လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မတ် ၁၉ ရက်တွင် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်နှင့် မီတာ(၁၅၀၀)ခန့်အကွာရှိ သောင်းကျန်းသူတို့အတွက် အရေးကြီးသော စစ်နည်းဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများဖြစ်သည့် ပွိုင့်-၁၅၆၄ နှင့် ရှင်ခုတ်ထန် မြောက်ဘက် တောင်ကြောတို့အား ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်၍ သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူထံမှ တရုတ်စက်လတ် ၁ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ၇၁၀ တောင့်၊ လက်ပစ်ဗုံး ၆ လုံး၊ TNLA ယူနီဖောင်း ၁ စုံ၊ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ ယူနီဖောင်း ၁၀ စုံ၊ မြန်မာ^ရခိုင်ဘာသာမှ မှတ်စုစာအုပ် ၁ အုပ်နှင့် လူ ၂၀၀ ခန့် အသုံးပြုနိုင်သော အုပ်ချုပ်မှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းမျိုးစုံတို့အား သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည်။ တပ်မတော်မှ စစ်သည် ၃ ဦး နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၁၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ MOI
————————————————————————————————————————————————————— တရုတ်နိုင်ငံနယ်နမိတ် အတွင်း ကျည်ကျ ရောက်မှု ဖြစ်စဉ် စိစစ်ဖော် ထုတ်နေဆဲ အချိနိမှာ တပ်မတော် လေကြောင်းပစ် ခတ်မှု တွေ ကို ပိုမို ထိန်းသိမ်းလာ ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံက တော့ နယ်စပ်ဒေသ မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အဦတွေ မှာ ကြီးမားထင်ရှားတဲ့ တရုတ် နိုငိငံအလံတွေကို ချိတိဆွဲပြီး မှားယွင်ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ပွားရအောင် ဆောင်ရွက် ထားရှိ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လေ ကြောင်းတ်ုက်ခိုက်ရာမှာ့မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု နယ်နမိတိ ကျော်လွန်ဝင်ရောက်မှုမရှိအောင် သတိပေးတယ် လို့ပြောလ်ု့ရသလို ကူညီပေးတယ် လို့လဲ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Tin Ko Win 20-3-2015
BE CAREFUL KOKANG TERRORIST NEWS According to news in front of the villagers, around 16:00 pm on March 20, again on the Chinese territory of Burmese fighters bomb, bomb placement in China Kang Meng Lincang town heap of mussels hole millet Hill (small Lu field), no casualties found. Transboundary unclear whether the aircraft, but this is already the fourth time this month, Burmese fighters to bomb the territory of China. Chinese fighter and no red flag 12 launch. After the incident, witnesses the first time to findaplacement. The bomb did not explode, hanging above the parachute. According to eyewitnesses, when he saw the Burmese military aircraft pitched five bombs, three of which should fall in Myanmar, there are two should fall on the territory of China. The figure isabomb fell on the heap Meng mussels hole Rue field eyewitness discovery. Another bomb fell on the side of Myanmar, the distance between the nearest Chinese border is just 10 meters. unofficial transl.အဆိုပါကြေးရှာသားမြားမြား၏ရှမှေ့ောကျ၌သတငျး၏အဆိုအရမတျလ 20 ရကျနကေ့ 16:00 နာရီခနျ့, တဖနျမွနျမာတိုကျလယောဉျဗုံး, mussels အပေါကျပွောငျးဆနျတောငျတနျး (သေးငယျတဲ့ Lu ကလယျပွငျ) ၏တရုတျနိုငျငံ Kang Meng နှငျ့ Lincang မွို့အမှိုကျပုံအတှကျဗုံးနရောခထြားမရှိ, ထိခိုကျသဆေုံးမှု၏တရုတျပိုငျနကျအပျေါ တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ လယောဉျဖွဈစမေရှငျးလငျး Transboundary, သို့သျောဤယခုပငျတရုတျပိုငျနကျနယျမွကေိုဗုံးခှဲတိုကျခိုကျရနျမွနျမာတိုကျလယောဉျယခုလစတုတ်ထအကွိမျဖွဈသညျ။ တရုတျတိုကျလယောဉျနှငျ့မြှမတို့အနီရောငျအလံ 12 ပဈလှတျ။ ထိုအဖွဈအပကျြပွီးနောကျ, မကျြမွငျသကျသမြေားအလုပျနရောခထြားတှရှေိ့ရနျပထမဦးဆုံးအခြိနျ။ အဆိုပါဗုံးကိုလထေီးအထကျကွိုးဆှဲခြ, ပေါကျကှဲဘဲနကွေ၏။ သူကမွနျမာစဈတပျလယောဉျပြံမွနျမာလဲသငြ့သုံးရာငါးဦးဗုံး, ကိုဆောကျကိုမွငျသောအခါမကျြမွငျသကျသမြေားအဆိုအရ, နှဈဦးတရုတျပိုငျနကျအပျေါကရြောကျသငြ့ရှိပါတယျ။ အဆိုပါကိနျးဂဏနျးကဗုံးကိုအမှိုကျပုံ Meng နှငျ့ mussels အပေါကျ Rue လယျပွငျမကျြမွငျသကျသရှောဖှတှေရှေိ့မှုပျေါမှာလှဲဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျဗုံးမွနျမာနိုငျငံဘကျခွမျးမှာပွပျဝပျလကျြ, အနီးဆုံးတရုတျနယျစပျအကွားအကှာအဝေးကို 10 ပဲမီတာဖွဈသညျ။ . တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ နေပြည်တော် မတ် ၁၉ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၏ ကန့်သတ် ချက်များကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ထူထပ်ရှုပ်ထွေးသော တောတောင် သဘာဝအနေအထား ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်အသုံးချကာ ချဉ်းကပ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများ တစ်လျှောက် သတ်ကွင်းများ ကြိုတင်စီမံထားခြင်း၊ အခြေပြုရာတောင်ကုန်းများ တွင် ဘန်ကာများ အခိုင်အခံ့ တည်ဆောက် ထားခြင်း၊ ပုန်းခိုရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် မြေခွေးကျင်းများ တူးထားခြင်း၊ ၎င်းတို့ လွယ်ကူစွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်၍ ခုခံတိုက်ခိုက် လျက်ရှိရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ သောင်းကျန်း သူများသည် ဒေသ၏ အချက်အချာကျပြီး အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများတွင် အဓိက အခြေပြု၍ လောက်ကိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးအား လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတောင်ကုန်းများအား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး အပြင်းအထန်ကြိုးစား လျက်ရှိရာတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိရောက်သော လေကြောင်း ပစ်ကူ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ လောက်ကိုင်ဒေသ၏ အချက် အချာနေရာ အများစုအား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအနီးရှိ ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်းတောင်ကုန်း အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် သောင်းကျန်းသူများက တောင်ကုန်းပေါ် တွင် အခိုင်အမာအခြေ ကုပ်ယူ၍ တောင်စောင်းများ တစ်လျှောက် သက်ကွင်း အဖြစ်ရှင်းလင်းကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် တရစပ်ခုခံ တိုက် ခိုက်လျက်ရှိရာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ထိရောက်သော ပစ်ကူပစ်အားနှင့် အတူ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ တက်ရောက်၍သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆက် လက်၍ ၎င်းတောင်ကုန်း၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၅၆၄ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းအပြင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊ ၁၃၂ သွားကားလမ်းအား စိုးမိုး ထားသည့် ရှင်ခုတ်ထန် ကျေးရွာ မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းတွင် အခြေပြု ခံစစ်ယူထားသည့် သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား တပ်မတော် စစ် ကြောင်းများက ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအား ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင် အားစုများက ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရရှိရေးအတွက် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ၊ စက်သေနတ်ကြီးများဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ရာ တပ် မတော်စစ်ကြောင်းများက ပစ်ကူ၊ ပစ်အားသုံး၍ သောင်းကျန်းသူများ ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်း ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ မာလုရွှေကျေးရွာအနီး တစ်ဝိုက်ရှိ တောင်ကုန်းများ တွင် အခြေပြုနေသော ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား လေကြောင်းမှ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်မှ စစ်သည် ၁ ဦး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၃၁ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ —————————————————- Army captures strategic hill in Laukkai area —————————————————– Nay Pyi Taw, 19 March — Fierce fighting broke out Thursday between the Myanmar Army and Kokang insurgents for control ofahilly zone in the Laukkai region, with government forces seizing the strategically important point. After taking Point 1479, army columns continued their attacks on Point 1564 to the east of Point 1479. Army battalions also confronted the enemy atahill located to the north of Shin Khot Htan village overlooking the road leading to Border Post No. 132. In the morning Kokang troops attacked Point 1468 hill which is under the control of the army. Tatmadawmen bravely repelled the enemy. The Myanmar Air Force also attacked insurgents, takingastronghold near villages to the north of Kongyan town. One army soldier died and 30 others were wounded in the fighting. Myawady MOI တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရရှိ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® နေပြည်တော် မတ် ၁၉ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ၏ ကန့်သတ် ချက်များကို အခွင့်ကောင်း ယူ၍ ထူထပ်ရှုပ်ထွေးသော တောတောင် သဘာဝအနေအထား ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်အသုံးချ ကာ ချဉ်းကပ်နိုင်သော လမ်းကြောင်းများ တစ်လျှောက် သတ်ကွင်းများ ကြိုတင်စီမံထားခြင်း၊ အခြေပြုရာတောင်ကုန်းများ တွင် ဘန်ကာများ အခိုင်အခံ့ တည်ဆောက် ထားခြင်း၊ ပုန်းခိုရှောင်တိမ်းနိုင်ရန် မြေခွေးကျင်းများ တူးထားခြင်း၊ ၎င်းတို့ လွယ်ကူစွာ လှုပ်ရှားသွား လာနိုင်ရန် လမ်းကြောင်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်၍ ခုခံတိုက်ခိုက် လျက်ရှိရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိသည်။ သောင်းကျန်း သူများသည် ဒေသ၏ အချက်အချာကျပြီး အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းများတွင် အဓိက အခြေပြု၍ လောက်ကိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးအား လွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်းတောင်ကုန်းများအား လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေး အပြင်းအထန်ကြိုးစား လျက်ရှိရာတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထိရောက်သော လေကြောင်း ပစ်ကူ၊ လက်နက်ကြီးပစ်ကူများဖြင့် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ လောက်ကိုင်ဒေသ၏ အချက် အချာနေရာ အများစုအား သိမ်းပိုက်ရ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအနီးရှိ ပွိုင့်-၁၄၇၉ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်းတောင်ကုန်း အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် သောင်းကျန်းသူများက တောင်ကုန်းပေါ် တွင် အခိုင်အမာအခြေ ကုပ်ယူ ၍ တောင်စောင်းများ တစ်လျှောက် သက်ကွင်း အဖြစ်ရှင်းလင်းကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် တရစပ်ခုခံ တိုက် ခိုက်လျက်ရှိရာ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ထိရောက်သော ပစ်ကူပစ်အားနှင့် အတူ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ တက်ရောက်၍သိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဆက် လက်၍ ၎င်းတောင်ကုန်း၏ အရှေ့ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၅၆၄ တောင်ကုန်းအား ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းအပြင် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊ ၁၃၂ သွားကားလမ်းအား စိုးမိုး ထားသည့် ရှင်ခုတ်ထန် ကျေးရွာ မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းတွင် အခြေပြု ခံစစ်ယူထား သည့် သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား တပ်မတော် စစ် ကြောင်းများက ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သော ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်း အား ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင် အားစုများက ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ရရှိရေးအတွက် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ၊ စက်သေနတ်ကြီးများဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာ ခဲ့ရာ တပ် မတော်စစ်ကြောင်းများက ပစ်ကူ၊ ပစ်အားသုံး၍ သောင်းကျန်းသူများ ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်း ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ မာလုရွှေကျေးရွာအနီး တစ်ဝိုက်ရှိ တောင်ကုန်းများ တွင် အခြေပြုနေသော ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများအား လေကြောင်း မှ ချေမှုန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်မှ စစ်သည် ၁ ဦး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေး လှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၃၁ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၁၉ ရက်နေ့တရုပ် မီဒီယာ မှ ဗုံးမှန်သေဆုံးတရုပ် မိသားစုတွေကလျော်ကြေးလက်မခံသေးပါ ။ စုံစမ်း စစ်ဆေးဆဲ ဖြစ်သည် ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများ မြန်မာတပ်မှ ရရှိသော လက်နက်များ တရုပ်စာဖတ်တတ်သူများ ကူညီပြီး ဘာသာ ပြန်ပေးပါ ။ ################# ကိုးကန့်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးထွန်းမြတ်လင်းက ဒေသခံများပါ ပူးပေါင်းလာ၍ ကိုးကန့်အင်အား ၃,၀၀၀ နှင့် မဟာမိတ် (TNLA နှင့်ရက္ခိုင့်တပ်မတော်)က ၂,၀၀၀ စုစုပေါင်း ၅,၀၀၀ ခန့်ရှိနေပြီဟုဆိုသည်။ အစိုးရတပ်မတော်ကလည်း ဒေသကွပ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ် (ဒစကလောက်ကိုင်)၊ တပ်မ (၃၃)၊ တပ်မ (၆၆) ၊ တပ်မ (၁၁)၊ စရက (၁၆) စသည့် တပ်မလေးခုအပါအ၀င် အင်အားစုစုပေါင်းခြောက်ထောင်မှ ခုနစ်ထောင်ခန့် ၀န်းရံထားရာ အင်အားအချိုးအစားကလည်း သိပ်မကွာလှကြောင်း စစ်ရေးလေ့လာသူများကပြောသည်။ ကိုးကန့်ကို ထိုးစစ်များ အရှိန်ဆက်မြှင့်ရန် တပ်မ(၆၆)ကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် အပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုးစစ်အရှိန်မြှင့်မည့်အချိန်တွင် တရုတ်ဘက်သို့ ဗုံးကျသည့်ပြဿနာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်များကို ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်မည့်နေရာ အနီးတစ်ဝိုက်ချထားပေးပြီး လူအင်အားအလုံးအရင်းကို လေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူပေးသည့် အကြီးဆုံးလေကြောင်းချီ ပြောင်းရွှေ့မှု လည်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။ ကိုးကန့်ဒေသသည် နယ်မြေအနေအထားအရ တောတောင်ထူထပ်ခြင်း၊ ကိုးကန့်တပ်များက နယ်ခံများဖြစ်၍ နယ်မြေကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုနှင့် လူမျိုးတူခြင်း နှင့် ဖုန်ကြားရှင်မှာ အစဉ်အလာအရ သြဇာညောင်းသည့် စစ်ဒေသခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်း၊ ယခုတိုက်ပွဲကို လူသူလက်နက်အင်အားသာမက ၄င်းတို့ကို ၀န်းရံမည့် တပ်ပေါင်းစုများကိုပါ ရှာဖွေစည်းရုံးထားနိုင်ခြင်း၊ ထို့အပြင် နယ်စပ်ခွထားသော တောင်ကုန်းအချို့တွင် တပ်စခန်းများချထားခြင်းနှင့် ယခုနောက်ဆုံး လေကြောင်း ပစ်ကူနှင့် လက်နက်ကြီးပစ်ကူများ တရုတ်ဘက်ကျရောက်ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော် ထိုးစစ်တွင် လေကြောင်းပစ်ကူကို ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရတော့မည်ဖြစ်ရာ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲသည် အနည်းဆုံး နောက်ထပ် လေးငါးလအထိ ကြာမြင့်သွားဖွယ်ရှိနေကြောင်း ထိုဒေသတွင် အချိန်အတော်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည့် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောသည်။ လောက်ကိုင် မြို့အား ကိုးကန့်သောင်းကျနိးသူအဖွဲ့ များ လာရောက်နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက် ကုန်းကြမ်း-မော်ထိုက်ကားလမ်းအနီး တောင်ကုန်း (၅)ကုန်းအားသိမ်းပိုက် •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများသည် ၄င်းတို့ခံစစ်ယူ အခြေပြုထားသည့် အချက်အခြာကျသောနေရာများ နှင့် စစ်ဗျူဟာ အရေးကြီးမြေနေရာအများအပြားအား စွန့်လွှတိခဲ့ရပြီး နောက်စစ်ရေးထွက်ပေါက်အဖြစ် လောကိကိုင် မြို့အားအဝေးမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း လမ်းကြောင်းများအား ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လာပါသည်။ ယနေ့ ၁၈-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် လောက်ကိုင်မြို့ အားတိုက်ခိုက်ရနိ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဖွဲ့ ၆ဖွဲ့ခွဲချီတက် လာစဉ် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများဖြင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြီးဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ကုန်းကြမ်း တာကျိုင်း မော်ထိုက်သွားကား လမ်းအား စိုးမိုးထားသည့် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက် လော်ကွာကျိုင်းအနီးရှိ သောင်းကျန်းသူ အခြေပြုနေရာများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လေကြောင်းပစ်ကူ ရယူပြီး တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ သောင်းကျန်းသူအခြေပြု ခံစစ်တောင်ကုန်း ၅ကုန်း အားသိမ်းပိုက်ရ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စီအောကျေးရွာ အနီးတွင် နံနက်ပိုင်း က တိုက် ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ပါစင်ကျော် ကျေးရွာနှင့် နယ်နမိတိမှတိတိုငိ အမှတိ ၁၃၇ အားဆက်သွယ်ထားသော တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုကိ စိုးမိုးထားသည့် ပွိုင့် ၁၄၆၈တောင်ကုန်း အား ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများမှ အဖွဲ့ များခွဲ၍ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ညပိုင်းမှစတင်ကာ ဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်လာသဖြင့် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား နေပါသည်။ အထက်ပါဖြစ်စဉ်များတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အလောင်းရ ၃ လောင်း ဒုံးပစ်လောင်ချာ ၂လက် လက်နက်ငယ်မျိုးစုံ ၆ လက် ခဲယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး တပ်မတော် သား ၁၃ ဦးကျဆုံးကာ ၂၈ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ ရှိ ခဲ့ပါသည်။ မတိလ ၁၇ ရက် မွန်းလွှဲပိုင်းက လောက်ကိုငိမြို့ အမှတိ ၁ ရပ်ကွက်ရှိနေအိမ် တစ်လုံးနှင့် ပျံကျတဲ တစ်လုံးအား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းရှာဖွေရာ အမျိုးသား ၁၆ဦးနဲ့အတူ မက်သာအက်ဖဒရင်း( ICE)၇ ကီလို ဂရမ် ကာလတန်ဖိုး( ၁၃၁၃သိန်းကျော်ဖိုး) အက်ဖဒရင်း ၂၁ ကီလိုဂရမ် ကာလတန်ဖိုး (၅၆၇သိန်းခန့်) WY ဆေးပြား ၆၀၀၀ပြား (သိန်း ၉၀)ခန့် WY စိတ်ကြွဆေးပြား အမှုန့်ရောရော ၁၃၀.၅ ဂရမ် ကာလတန်ဖိုး (၂၀၆ သိန်းခန့်) ဘိန်းဖြူဘလောက်တုန်း ၃၀၀ ဂရမ်ခန့် ၁ တုံး ကာလတန်ဖိုး( သိန်း ၆၀) နှင့် ဆက်စပ်အရောင်တင် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ လောက်ကိုင်ဒေသ၊ တအာင်းတပ်မတော်(TNLA) ၊ MNDAA၊ AA တပ်ပေါင်းစုနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက် လောက်ကိုင်ဒေသ၊ ကုန်းကြမ်းအထက်ဘက်တွင် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၀၇း၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၁၄း၀၀ နာရီ အချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော်၊ ဗျူဟာ(၄)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၈၁၈) ၊ MNDAA၊ AA တပ်ပေါင်းစုနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဘက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။ တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲသတင်းအား ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။ သတင်နှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန PSLF/TNLA 18.MARCH 2015 RIP KILLED BY KOKANG TERRORISTS AND ALLIES ၁၈ – ၃ -၂၀၁၅ ========== ယခုလက်ရှိကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲများတွင် ကိုးကန့်သောင်ကျန်းသူများက တောင်ကုန်းများတွင် လိုဏ်ခေါင်းများဖောက်လုပ်ပြီး ခြေကုပ်ယူ တိုက်ခိုက် သော်လည်း ယင်းလိုဏ်ခေါင်းများဟာ တရုတ်နိုင်ငံထိ ဖောက်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ အတည်မပြုနိုင်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြား သည်…… လေယာဉ်နဲ့ဗုံးကြဲရင် လိုဏ်ခေါင်းထဲပြေးဝင်ပြီး လေယာဉ်အပစ်ရပ်တဲ့အချိန်ကြရင် လိုဏ်ခေါင်းထဲ ကနေပြန်ထွက်လာပြီး အပေါ်ကနေစီးပစ်ကြပါတယ် (မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတွေ့ရသောကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူများ ) cr.Naw Kham MOI: ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၊ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများ ထံမှ လက်နက်ခဲယမ်း များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ သိမ်းဆည်းရမိ နေပြည်တော် မတ် ၁၇ ပါစင်ကျော်ကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊၁၃၇ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းအား စိုးမိုးထားသည့် ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စစ်ဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော တောင်ကုန်းအချို့အား တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက မတ် ၁၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ရရှိခဲ့သည်။ လောက်ကိုင်ဒေသအတွင်း ပါစင်ကျော်ကျေးရွာမှ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင်အမှတ်၊ ၁၃၇ သို့သွားသော ကားလမ်းမြောက်ဘက်ရှိ ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများ အခိုင်အမာ ခြေကုပ်ယူ ခံစစ်ပြင်ဆင်ထား သည့် ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်း များအား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက မတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းမှစတင်၍ လက်နက်ကြီး ပစ်ကူရယူပြီး တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူအင်အားစုများက မြေအနေအထား အသာစီးရယူ၍ ခံစစ်ကျင်းများ တူးကာ လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပြန်လည်ခုခံ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်သား များ၏ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံတိုက်ခိုက် မှုကြောင့် ည ၇ နာရီခန့်တွင် သောင်းကျန်းသူများ တောင့်ခံ နိုင်ခြင်းမရှိ ဘဲ မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီး တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်း အချို့အား သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။ တချိန်တည်းတွင် ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်း၏မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းများ၌ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများနှင့် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူ အင်အားစုများ ထိတွေ့တိုက်ပွဲ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အလားတူ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကုန်းကြမ်းမြို့မြောက်ဘက်ရှိ လော်ကွာ ကျိုင်း ကျေးရွာ အရှေ့မြောက်ဘက် မာလုရွှေကျေးရွာတစ်ဝိုက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေရှင်းလင်း ခြင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ နေရာ(၃) နေရာတွင် ထိတွေ့တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မာလုရွှေကျေးရွာအရှေ့မြောက်ဘက် တောင်ကုန်းတွင် ဖြန့်ခွဲနေရာယူ ထားသည့် ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူအင်အားစုအချို့မှာ တောင်ဘက်သို့ ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီး မာလုရွှေကျေးရွာ မြောက်ဘက်(၂)နေရာ တွင် ဖြန့်ခွဲအခြေပြု၍ ခုခံလျက်ရှိသော သောင်းကျန်းသူများအား တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ဆက်လက်ထိန်းချုပ် တိုက်ခိုက် လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် မတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့များ ခိုအောင်း နေထိုင်ကြောင်း သတင်းအရ လောက်ကိုင်မြို့အနီးရှိ အဆောက်အဦ တစ်လုံးအား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ဝင်ရောက် ရှင်းလင်းခဲ့ရာ မြေအောက်ခန်း အတွင်းမှ ပန်းရောင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား အမှုန့် ၅ ကီလိုဂရမ် ၁ ထုပ် (ကာလတန်ဖိုး ကျပ် သိန်း ၁၀၀၀ ခန့်)၊ အဖြူရောင် အက်ဖက်ဒရင်းအမှုန့် ၅.၇၅ ကီလိုဂရမ် ၁ ထုပ် (ကာလ တန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁၅၀ ခန့်) နှင့် အဝါရောင်အမှုန့် ၃၀၀ ဂရမ်ခန့်အား သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။ အထက်ပါ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်များတွင် ကိုးကန့်သောင်းကျန်းသူများထံမှ MNDAA ယူနီဖောင်းဝတ် အလောင်း ၃ လောင်း၊ လက်နက်ငယ် ၂ လက်နှင့် ခဲယမ်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီး တပ်မတော်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည် ၃ ဦး တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့၍ ၄ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ မတ် ၁၇ မြန်မာ့တပ်မတော်မှဘိန်းစားတယုတ် များခြေကုတ်ယူခံစစ်ပြင်ထားသောပွိုင့်၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအားသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ် နယ်စပ်မှာ တရုပ် လက်နက်ကြီးတပ်ဖွဲ့ခန့် မှန်းနေရာ ကိုးကန့် အဖွဲ့ က လောက်ကိုင်နဲ့ချင်းရွှေဟော် ဆက်သွယ် ထောက်ပံရေး လမ်းကြောင်း ဖြတ်တောက်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ အရပ်သား ကားများ ကြက်ခြေနီများ မကျန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာ့ တပ်မတော်က မြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းတွေပေါ်က ခြေကုတ်ယူထားတဲ့ ကိုးကန့် အင်အား ၁၀၀၀ ခန့် ကို ခြေလျှင် ခြေမြန် တပ်ရင်းတွေနဲ့မရှင်းလင်းနိုင်လို့လေကြောင်း စစ်ကူ တောက်ရှောက် ယူခဲ့ရပါတယ် ။ ကိုးကန့်တပ်များ ကို လက်နက် ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှုကို ပင်ဆန်းတောင်ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ Dashuijing ကျေးရွာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အခု နောက်ဆုံး တက်လာတဲ့ ဗီဒီယို အရ တရုပ် လက်နက်ကြီး တပ်ဖွဲ့ ဟာ Dashuijing ကျေးရွာ အနားက တောင်ခြေ နားမှာ တပ်စွဲထားတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် ။ မြန်မာ ပိုက်လော့တွေ ရှောင်နိုင်ဖို့ ပါ ။ ပြည်တွင်းက အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်တွေကိုလည်း အကြံပြု ချင်ပါတယ် ။ တိုင်းပြည် အရံ အင်အားဟာ ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေ ဖြစ်လို့တုတ်နဲ့ ရိုက်ပြီး သွေးခွဲမဲ့ အစား စားပွဲပေါ် ဆွေးနွေးမဲ့ လမ်းစဉ်ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြစေချင်တယ် ။ ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဆန္ဒပြသူ အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်စေချင်တယ် ။ ပုလင်း နဲ့ ပေါက်တဲ့သူတွေ ဂဲနဲ့ပစ်တဲု့သူတွေ ပစ္စည်း ဖျက်ဆီးသူတွေ ဖမ်းပြီးတုတ်နဲ့ရိုက်သူတွေကို အပြစ်ပေး အရေးယူပါ ။ htay thint တရုတ်ဘက်သို့ထွက်ပြေးလာသော ကိုးကန့် သူပုန်များအား တရုတ်စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးထားပုံ တရုတ်ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ တရုတ်ဘက်သို့ တူးထားသော မြေအောက်လိုင်ခေါင်းနှင့် ဘန်ကာ …………… တမာမြေမှ ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များ ခံစစ်ယူ ပြင်ဆင်ထားသည့် ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်းအား တိုက်ခိုက် ချေမှုန်း ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® နေပြည်တော်၊ မတ် – ၁၆ လောက်ကိုင်မြို့ အရှေ့ဘက်ရှိ ပွိုင့်-၁၂၁၉ တောင်ကုန်းတွင် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက် နေသော တပ်မတော် စစ်ကြောင်းအား မတ် ၁၅ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူ အင်အားအချို့က လက်နက်ငယ်၊ လက်နက်ကြီးများဖြင့် လာရောက် နှောင့်ယှက် ပစ်ခတ် ခဲ့သဖြင့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက ပြန်လည် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ ပါစင်ကျော်ရွာမှ ဘီပီ-၁၃၇ သို့ သွားသော ကားလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေ ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်စဉ် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် ကားလမ်း မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ ပွိုင့်-၁၄၆၈ တောင်ကုန်း အနီး၌ ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များနှင့် ထိတွေ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ တောင်ကုန်းတွင် ခံစစ်ယူ ပြင်ဆင်ထားသော ကိုးကန့် သောင်းကျန်းသူများအား တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ဆက်လက် တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းလျက် ရှိသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များတွင် တပ်မတော်မှ အရာရှိ ၂ ဦး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေးလှူခဲ့ပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည် ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့၍ ဒဏ်ရာ ရရှိသူများအား တပ်မတော် ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင် ဆေးကုသမှု ခံယူလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ####
from → Burma, china, Dashuijing, MYANMAR, VIDEO
← ! ! #clip #ကိုးကန့်ဒေသတိုက်ပွဲတွင် #တပ်မတော်(လေ)မှကြဲချသောဗုံး #တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကျရောက်ပြီး
#Chinese #fighter #jets #patrolled over the #China #Myanmar #borders →